RASMI: Difaacii diiradda u saarnaa Man United ee Fabinho oo heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxdiisa AS Monaco – Gool FM
RASMI: Difaacii diiradda u saarnaa Man United ee Fabinho oo heshiis cusub qalinka ugu duugay kooxdiisa AS Monaco
Haaruun September 10, 2016
(Monaco) 10 Sebt 2016 – Difaacii dirradda u saarnaa Man United, kaasoo bishii Janaayo bartilmaameed u ahaa Jose Mourinho ee Fabinho ayaa heshiis cusub oo waqti dheer qalinka ugu duugay kooxdiisa Monaco.
AS Monaco oo ka war haysay xiisaha difaaceeda 22-jirka ah ay u haysto Manchester United ayaa heshiis shan sanadood ah ka saxiixatay wiilka reer Brazil, taasoo meesha gabi ahaanba ka saaraysa xiisaha xiddigan ee Man United.
Hadda Mourinho waxaa kooxdiisa difaac midig uu ka ciyaarsiiyaa Antonio Valencia waana doorashada kaliya ee uu haysto marka laga reebo Darmian oo uu doonayo in uu iska iibiyo.
Monaco ayaa xaqiijisay in difaacan boosaska badan ka dheela uu qalinka ugu duugay heshiis cusub oo ku eg ilaa 2021, si ay uga ceshato kooxaha doonaya.
Fabinho : “Je suis très heureux de prolonger à l’AS Monaco” #Fabinho2021
Pep Guardiola: 'Claudio Bravo diyaar ayuu u yahay kulanka Manchester Derby'
Horudhaca Real Madrid v Osasuna: Cristiano Ronaldo oo dib u soo laabanaya kulankan